धनको कामना गर्नुभएको छ ? बुधबार यस्तो कार्य गर्नुहोस्
कहिल्यै धन सम्पतिको कमी हुन नदिन के गर्ने ?
यी धनी अभिनेत्रीहरुले आफु कंगाल हुन्छु भनेर कहिल्यै सोचेनन्
श्रीमानको हत्याराबाट पैसा असुल्ने पक्राउ
काठमाडौँ । श्रीमानको हत्याको घटना लुकाउन हत्यारासँग पैसा लिएको अभियोगमा प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भोजपुर नगरपालिका–४ सिद्धेश्वर दावाकी मीना मिजार सार्की रहेकी छिन् ।
कति छ भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहको सम्पत्ति !
एजेन्सी । बिजेपी पार्टी अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री अमित शाह पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका छन् । उनले जम्मु कश्मीरलाई दिएको अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै चर्चामा रहेका छन् ।
काठमाडौँ । हरेक वर्खायाममा चर्चामा आउने कोसी र गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारले झण्डै दुई दर्जन कर्मचारी खटाएको छ । यी परियोजना हाँक्न सरकारबाट नियुक्त दुई सम्पर्क अधिकृत ९लियाजन–अफिसर० सहित सबै नेपाली कर्मचारीले भारतको विहार राज्य सरकारबाट नियमित तलब थाप्दै आएका छन् ।
तपाईको घरमा कहिल्यै पनि पैसाको कमी हुन नदिन के गर्ने ?